Cabdi Faarax Juxa: Raali kama nihin in Taako dhul ah oo Soomaalidu leedahay iney cid kale xaqdaro ku qaato[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Cabdi Faarax Juxa: Raali kama nihin in Taako dhul ah oo Soomaalidu leedahay iney cid kale xaqdaro ku qaato[Dhageyso]
DOOLOW – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay iney qiimeyn ku sameynayso walaaca ay dadka qaar ka qabaan ee ku aadan in Kenya ay derbi ka dhisayso xadka labada dal,isla markaana uu derbigaasi uu soo galay gudaha dalka Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Iyo Federaaleynta Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay in uusan jirin dhisme ka socda balse uu jiro derbiga laakiin uu joogsaday hadda.
Hadda meesha aanu aragnay wax dhisme ah oo ka socda majiro,waa jiraa derbi la dhisay oo 7km in ah baanu aragnay laakiin magaalada afkeeda marka uu joogo waa tuu buuqu dhacay halkaas ayuu hadda taagan yahay wax dhisme ah oo hadda socda majiro…”ayuu yiri Juxa
Cabdi Faarax Juxa oo waraysi siinayay VOA Soomaali ayaa sheegay in uusan wax jawaab ah ka bixinayn arrinta derbiga balse ay dhawaan warbixin dhameystiran kasoo saari doonaan arrintan.
…” Kama bixinayo wax jawaab ah oo hordhac ah,waxaan diyaarinaynaa warbixin “ayuu yiri Juxa
….” Waxaan aaminsanahay in taako dhul ah oo Soomaalidu leedahay iney cid kale xaqdaro ku qaadato raali kama nihin,dadkuna ma ogola ,cid kale in xadkooda iyo dhulkooda lagu xadgudbo sidoo kale marabno”ayuu yiri Juxa mar kale.
Hoos ka dhageyso Waraysi uu Harun Macruf la yeeshay.